Bogga ugu weyn / blog / Qasabada biyaha? Daxalaystay? Biyuhu Ma Gaabanayaan? Gacmaha Sida loo Hagaajiyo
2020 / 10 / 21 Qoondayntablog 2046 0
Cinwaanka Musqusha Xiaoxin
Ka warran qasabadaha qasbay?
/ Furitaanka Qasabadaha
Tuubbo shaqeyneysa 365 maalmood sanadkii, gaar ahaan tan biyaha kulul u isticmaasha si joogto ah, waxaa hubaal ah inay ku xirnaan doonto limescale. Waqti ka dib, biyaha ka soo baxa tubada ayaa sii yaraanaya oo sii yaraanaya, taas oo aad u saameysa khibrada isticmaalka qasabadda.
Kaliya isticmaal kubbado cudbi ah oo la jeexjeexay, ku dar qadar yar oo khal khal ah kuna hagaaji qasabada ilaa 5 daqiiqo.
5 daqiiqo ka dib, mar kale fur tuubada oo arag, socodka biyaha isla markiiba wuu sii weynaaday ~.
Inbadan oo saaxiibo ah madaxyada qubeyska guryaha kuma soo saaraan biyo si habsami leh markii ay in muddo ah isticmaalaan. Xitaa kuma raaxeysan karaan raaxada qubeyska wanaagsan ~.
Kaalay isku day wax yar oo khal cad ah oo ku jira bac balaastik ah kuna duub madaxa qubeyska ilaa 30 daqiiqo. Madaxa qubeyska ayaa u fiicnaan doona sida cusub ~!
/ Kala Bixinta Bixinta /
Sink si qalad ah u xirmay? Ha welwelin, ku shub khalka cad iyo soodhada saxanka saxarada qiyaas ahaan 1: 1, markooda.
In ka yar hal daqiiqo, saxanka isla markiiba waa la xidhi karaa, furaha ma aha gacmo wasakh leh oh.
Isbadalka qasabada ayaa fiirinaya
/ Fududeynta Helitaanka Biyaha /
Saxanku aad ayuu u yaryahay runtiina waa wax aan ku habboonayn in la isticmaalo baaldi weyn oo lagu qabsado biyaha.
Kaliya ku dar majarafad yar ama dhalo balaastig ah wejiga hore ee tuubada, si fudud waad u qabsan kartaa biyaha ~ ma daadin doono oh.
/ Si sahlan loo dhaqo gacmaha /
Haddii qasabaddu ay aad ugu fog tahay guriga, kuma habboona inaad gacmaha iska dhaqdo. Waxaad si fudud ku xallin kartaa dhibaatadan adigoo u beddelaya dhalooyin caag ah oo la isticmaalay wax yar.
Dhaq dhalada hore ee balaastigga ah oo jarjar salka hoose.
Kadib si toos ah ugu dheji qasabada si aadan ugu foorarsan markaad gacmaha dhaqeyso! Waxay kaloo ka hortagtaa biyaha la saydho.
/ Burburin-Caddayn /
Qaar ka mid ah asxaabteena waxay ku isticmaalaan qasabadaha qadiimiga ah musqulaha ay guriga ku leeyihiin, kuwaas oo lagu rakibay meel sare oo ay ku firdhinayaan dhamaan jirkooda hadii aysan taxaddarin. Kuu barto xeelad, dhalo caag ah ayaa xallin karta dhibaatada.
Marka hore, calaamadee qeybta sare ee dhalada balaastigga ah ka dibna ku fur qalab.
Qoraallada qoraalka: Waxaan calaamadeyn doonnaa dhalada caagga ah marka hore. Kadib ku jar qalab.
Qoraallada qoraalka: Xusuusin: meesha giraanta afku waa la goyn karaa ama lama gooyn karaa, iyadoo ku xiran cabbirka cabbirka. Goynta ka dib, waxaan u isticmaalnaa maqas si aan u dhisno geesaha qallafsan (si looga hortago in gacmaha la jaro).
Marka xigta, ku dheji daboolka dhalada caag ah ee dhammeeyey qasabadda.
Qoraallada qoraalka: Waxaan dhalada caagga ah ee la jaray dul saaray tubbada.
Gashaanti qasab fudud ayaa sameyn doonta, si socodka socodka biyuhu u yeesho qaanso cayiman, marka waxyaabaha la dhaqaayo ma bur burinayaan, laakiin sidoo kale si loo xakameeyo jihada socodka biyaha ~ waa.
Qoraallada qoraalka: Taasi waa tii. Sidaad u aragto, socodka biyuhu wuu qaloocan yahay oo waxbaa la dhaqi karaa.
Sideed U Hagaajisaa Qasabad Qarqeysa?
Qasabadaha qasnadoodu burbursan yahay oo inta badan leh dhibaatooyin aan ka ahayn xirmada ayaa ah daloolo. Sidee loo hagaajiyaa tuubada soo daadata lafteeda?
Marka hore, ka fur saxanka daboolka balaastigga dusha sare ee tuubada, ka dibna isticmaal aaladda si aad u furfurato boolal hoose.
Qoraallada qoraalka: Markaad furto, waxaad arkaysaa fur. Waan furaynay. Ka nadiifi saxanka daboolka balaastikada dusha sare ee gacanka qasabadda.
Mar alla markii aad furaysid boolal, ka saar gacanta qasabadda.
Qoraallada qoraalka: Mar alla markii aan la furin, waxaan ka qaadi doonnaa qasabadda qasabadda.
Ugu dambeyntii, adeegso qalabka si aad u adkeyso boolal. Badanaa qasabadaha ayaa daata maxaa yeelay boolalku waa dabacsan yihiin, markaa kaliya xooji boogaha si looga hortago daadashada.
Qoraallada qoraalka: Ilaa iyo inta aan ku adkeyneyno jeexjeex, waan ku fiicanahay inaan tagno.
Sidee si caqli leh loogu nadiifiyaa tuubada
/ Jeexitaanka /
Ha ku degdegin inaad daadiso waxa soo hadhay ketchup, ku qoo qaddarka saxda ah ee ketchup smear qaybaha daxalaystay ee qasabadda, joog ilaa 5 daqiiqo, ka dibna ku tirtir maro qoyan, miridhku isla markiiba wuxuu marayaa raad la'aan. .
/ Ka saar wasakhda Biyaha /
Liinta kalabar u jar oo u isticmaal inaad ku masaxdo qasabadda. In ka yar 2 daqiiqo, tuubada ayaa isla markiiba nadiif ah oo dhalaalaysa!
Hore:: Qoysaska Shiinaha, Runtii Miyaanay U Qalmin Kala-Bixinta Saddexaad? Next: Dayactirka Muraayada Musqusha, 99% Dadku wey iska indhatiri doonaan Faahfaahintaan
Warbixinta Isbeddellada Musqusha ee Mareykanka ee 2020: Musqulaha Smart, Musqulaha dareemayaasha, iyo Fiidmeerta Khaaska ah ...
NALA SOO XIRIIR Emayl: sales@wowowfaucet.com